China Submersible Sewage Pump (0.75-7.5Kw) ndị na-emepụta na ndị na - eweta ya | KAIQUAN
Engineering Injinia obodo
W nsị mmiri lndustrial
Occasions Oge ọgwụgwọ nsị iji gbapụsị nsị mmiri
● Mmiri na-abaghị uru na mmiri ozuzo nke nwere ihe siri ike na obere eriri
Na-asọ: 5-150m3 / awa
● Isi: Ihe ruru 42m
● Liquid okpomọkụ: º 40ºC
● Liquid njupụta: ≤1050kg / m3
Val PH Uru: 4 ~ 10
WQ / EC Series Obere Mmiri Mmiri Mmiri
WQ / EC Obere Mgbapụta Mmiri Mmiri Mmiri Dị Mgba:
1. Họrọ mgbapụta ahụ na impeller
A na-eji teknụzụ CAD eme ihe ugboro ugboro iji mepụta atụmatụ ahụ, nke mere na mgbapụta ahụ na impeller na-adaba adaba, na eriri na irighiri ihe dị mfe ịgafe na-enweghị ọnyà na igbochi. Na impeller bụ nditịm guzozie, nke mere na mgbapụta nwere ala vibration na mụ ọrụ.
2. Nnukwu moto submersible a pụrụ ịtụkwasị obi
Ejiri ụgbọ mmiri a na-emepụta nke ọma ma rụọ ọrụ nwere ọkwa nchedo nke IP68 na stator winding bụ mkpuchi F-klas. N'ihi na ezi mmetụta jụrụ nke submersible ọrụ na ala n'ezie okpomọkụ ịrị elu nke asọfe, na moto ọzọ bụ inogide.
3. The moto nwere uko akara na nlezianya nnyocha
4. A pụrụ ịdabere na-amị nhazi
The miri uzo bọl biarin nke ama ika na-ahọrọ, nke nwere ezu ibu oke iji hụ na a pụrụ ịdabere na ọrụ nke ngwaahịa.
5. Jet inggwakọta ọrụ
A na-emeghe oghere ikuku jet na ahụ mgbapụta ahụ. Mgbe mgbapụta ahụ na-agba ọsọ, mmiri nrụgide dị na mgbapụta ahụ na-etolite ụgbọ elu ọsọ ọsọ site na oghere jet maka ebido dị ike, nke mere na a kwụsịrị ọtụtụ adịghị ọcha, mgbapụta ahụ amịrị ma hapụ ya. Agaghị enwe mmiri ozuzo na mpaghara buru ibu, nke dị mma karịa naanị ịmịnye igwe n'ọdụ ụgbọ mmiri mgbapụta.
6. Ngwaọrụ nchebe
A na-etinye ihe nchebe na-ekpo oke ọkụ na windings moto. Mgbe ọnọdụ ikuku na-agba ọsọ karịa okpomọkụ a kapịrị ọnụ, ihe nchebe na-ekpo oke ọkụ ga-agbanye "ọkụ" ọkụ ọkụ site na kọmpụta na-achịkwa ọkụ ma mechie ya na akpaghị aka. Chetara onye na-ahụ maka ọrụ ka ịlele iji chọpụta ihe kpatara igwe iwe oke ọkụ. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku na-ada ada, ihe nchebe na-ekpo oke ọkụ ga-akpaghị aka, ma enwere ike ịgbanye moto ahụ. Agbanyeghị, ịgaghị agbanye ya ruo mgbe ekpochapụ ikpo ọkụ ọkụ ọkụ.
Nke gara aga: Submersible Axial, Mixed Flow mgbapụta
Osote: Mmiri Mmiri Na-asọba Mmiri （11-22Kw）
WQ / EC Obere obere mmiri nke mmiri na mmiri na nkọwapụta
WQ / EC Obere Mgbapu Mmiri Mmiri Mmiri Akpadoro
Mgbapụta mmiri ， booster mgbapụta ， mgbapụta mmiri mgbapụta motor moto ụgbọ mmiri ， ọnụahịa mgbapụta ， mmiri ọkụ na-adọrọ adọrọ